Ngaba iiBloggers zibeka abaNtshatsheli beeNgcali?
Bonke baya kunika ulwazi olufanelekileyo kubathengi beendaba
Xa ibhulogi ibonakala kuqala kwi-intanethi, kwakukho i-hype eninzi kunye ne-hoopla malunga nokuba iiblogizi zinokuthi zithathe indawo yamatye eendaba. Emva kwakho konke, iiblogi zazisasaza njengama-mushroom ngelo xesha, kwaye malunga nobusuku kwabonakala kubakho iiblogi ze-intanethi kwi-intanethi, ukulandelela ihlabathi njengoko babona kufanelekile kwiposi elitsha ngalinye.
Ngokuqinisekileyo, ngokuncedwa kwempembelelo, ngoku sinokubona ukuba iiblogi zazingakaze zikwazi ukubeka indawo kwimicimbi yeendaba.
Kodwa iibloggers, ezilungileyo zincinci, ziyakongeza umsebenzi wabaphengululi beengcali. Kwaye apho i- journalism yoluntu ingena khona.
Kodwa makhe siqwalasele ukuba kutheni iiblogi zingenakutshintsha indawo yeendaba zendabuko.
Bavelisa izinto ezihlukeneyo
Ingxaki yokuba neeblogi zitshintshe amaphephandaba kukuba ezininzi iibhloko zeeblogi azivelisi izindaba zeendaba . Kunoko, bathambekele ekuvakaliseni amabali eendaba asele apho-amabali aveliswa ngabapapasho bezengcali. Enyanisweni, ezininzi zezinto ozifumanayo kwiiblogi ezininzi zizithuba ezisekelwe kulo, kwaye zidibanisa kwakhona, amanqaku avela kwiiwebhsayithi zeendaba.
Iingcali zengxelo zengcali zithatha izitrato zoluntu ezizibandakanya imihla ngemihla ukuze zibambe amabali abalulekileyo kubantu abahlala khona. Ibhulogi engabonakaliyo ngumntu ohleli kwiikhompyutyana zabo kwiikhompyutri zabo, engazange ahambe ekhaya. Loo mbono awufanelekanga kubo bonke abalulogi, kodwa ingongoma yinto yokuba ukunyathelisa intatheli kubandakanya ukufumana ulwazi olutsha, kungekhona nje ukuphawula ngolwazi olusele lukhona.
Kukho ulwahlulo phakathi kweemiboniso kunye nokubika
Olunye utyando ngeeblogizi kukuba endaweni yokunika ingxelo yangaphambili, ayenzi nto kodwa avelise izimvo zabo malunga nemiba yosuku. Kwakhona, lo mboniso awunakulungele ngokupheleleyo, kodwa ezininzi iiblogi zichitha ixesha elininzi zikwabelana ngeengcamango zabo.
Ukuvakalisa izimvo zomntu kuyahluke kakhulu ngokwenza ingxelo yeendaba . Kwaye nangona iimbono zilungile, iiblogi ezingenzi nto ngaphandle kokuhlela iyanelisekile ukutya komntu ngenjongo, inyaniso.
Kukho Ixabiso Elikhulu Kwiinkampani ZamaReporters
Abaphengululi abaninzi, ngokukodwa abo kwiinkampani ezinkulu zeendaba, balandele iinqwelo zabo iminyaka. Ngoko nokuba ngaba i-Washington bureau intloko ebhala ngepolitiki yeNdlu ye-White House okanye umgcini wezemidlalo umgcini wexesha elide ephethe iipokethi zokugqibela, amathuba okuba abhale kunye negunya kuba bayazi isihloko.
Ngoku, ezinye iiblogizi ziyingcali kwiihloko zazo ezikhethiweyo. Kodwa baninzi abangabamkeli abanomdla abalandela uluntu oluvela kude. Ngaba bayakwazi ukubhala kunye nolwazi olufanayo nolwazi njengobhali-ntatheli umsebenzi wabo ukulungiselela isihloko? Mhlawumbi akunjalo.
Iibhloko zeBloggers zingayongeza njani umsebenzi woTshintsho?
Njengoko amaphepha amaphephandaba anciphisa ukusetyenziswa kwemisebenzi ngokusebenzisa abapheli beendaba, banda ngokusebenzisa iibloggers ukuxhasa umxholo onikezelwe kwiwebhusayithi yazo.
Ngokomzekelo, i-Seattle Post-Intelligencer kwiminyaka emininzi edlulileyo yavala umshicileli wayo kwaye yaba yintlangano yeendaba yewebhu kuphela. Kodwa ekutshintshweni kwabasebenzi beendaba baqunyiwe ngokuphawulekayo, beshiya i-PI nabancinci beendaba.
Ngoko i-website ye-PI yajika yafunda iiblogs ukuze ifake inkxaso yayo kwindawo yase Seattle. Iibhulogi ziveliswa ngabahlali basekhaya ababazi isihloko sabo esikhethiweyo kakuhle.
Okwangoku, abaninzi abaphengululi beengcali baphumelele iiblogi ezithathwe kwiwebhusayithi zephephandaba. Basebenzisa le bhulogi kwakhona, phakathi kwezinye izinto, ukuzalisekisa ingxelo yabo yenkcazelo yemihla ngemihla.
Ukudala koMhlaba njengoko kuchaziwe kwiQur'an
Abadwebi abaziwayo: LS Lowry
Funda indlela yokwenza izakhono zoBuchule baseGymnastics
Sebenze Amagxa Akho Aphakanyiswe Ngamaxesha Aphelileyo
Iindawo Zomongameli Oza Kufuna Ukuzifumanisa